Home Based mhlophe Amazinyo | Indlela Engcono Kakhulu mhlophe Amazinyo Guide
Kukhona imikhiqizo eminingi mhlophe phandle lapho ingakusiza ukuqeda basuse izisihla noma amazinyo aphuzi. Uzothola mhlophe emapheshana, ugqoko bagcwala whitener noma mhlophe emapheshana. Lezi zindlela ezingezansi zonke izindlela ezinkulu mhlophe professional ebizayo.
Strawberries ingasetshenziswa njengendlela indlela yemvelo mhlophe amazinyo. Zezakhi zemvelo ezitholakala strawberry ngeke zibe mhlophe amazinyo ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali. Ungakwazi bahlanganise ama-strawberry ibe unama ukuthi ungakwazi ukuxubha amazinyo kwi yakho bese wasiqashisa ahlale imizuzu embalwa noma usike sitrobheli ngesigamu, bese basihlikihle kuma amazinyo akho isikhashana.
TIP! Izithelo ziyindlela enhle futhi zemvelo mhlophe amazinyo ngezikhathi ezithile. Isibonelo of ezinye zezithelo ezisebenza omkhulu mhlophe amazinyo akho bekuyoba strawberry namawolintshi.
Qiniseka Amazinyo akho anjengomhlambi babegcina bahlanza ngaphambi kokusebenzisa ekhaya mhlophe amazinyo lwemithi. Mhlophe imikhiqizo amazinyo izosebenza best uma sizisebenzisa ku amazinyo kuhlanzekile. Uma amazinyo akho akuzona ahlanzekile uma uqala ukuba zibe mhlophe ngayo kunethuba elihle ukuthi umphumela kungenzeka kube engalingani noluphawulekayo.
Amazinyo mhlophe emapheshana ayatholakala kabanzi futhi ezingabizi kakhulu. You umane kudingeka ubeke strip on amazinyo akho, bese siyishiya khona esithile sikhathi ahlanze futhi whitens amazinyo akho. Once ethandwa, emapheshana mhlophe akasabenameli ngezinkulumo eziningi ngenxa yemiphumela yabo abampofu.
TIP! Amazinyo mhlophe imikhiqizo ingase amazinyo akho sensitive umkhiqizo wena usebenzisa. Kubuhlungu ngisho nakuba kungokwesikhashana nje.
Udinga uqaphele kakhulu lapho edla noma ephuza ngemva kokuba kwenziwe mhlophe inqubo amazinyo kwenziwe. Amazinyo umunce uzoyithola namabala kalula kakhudlwana amabala emva kokuba lase lishisa. Kubalulekile ukugwema dark ezinemibala ukudla neziphuzo ngemuva amazinyo akho esanda lase lishisa. Coffee uyisibonelo into ezokwenza kalula amuncwa amazinyo akho futhi kungabangela ukushintsha kombala.
Into ebaluleke kakhulu ongayenza ukuze uthole smile ngokumangalisayo elimhlophe ukuya wamazinyo for cleanings avamile. Qiniseka ukuba ahambe zonke ezihlanzekile 6 izinyanga. Khumbula njalo ukuze usethe i-aphoyintimenti entsha ngesikhathi wamazinyo ukuze ungakhohlwa kamuva. Buza ihhovisi lakho zamazinyo ukukukhumbuza ngaphambi nge ucingo.
TIP! Ukuxubha amazinyo njalo ngemva kokudla kuyindlela omkhulu ukugcina kwabo khulula kusuka ndawo, kuzwakala. ukudla Abaningi futhi iziphuzo ezingadala ibala amazinyo akho.
Carry isixubho encane ukuthi ukusebenzisa emva kokudla ukudla okunoshukela. Lezi amaswidi unamathela amazinyo akho, futhi abangele staining noma wengeze nalokho okungenzeka seziyakwazi kakade unayo. Ngemva kokudla amaswidi, ukuxubha amazinyo akho imali esifushane. Okokuxhubha akudingekile; nje khuhla amazinyo akho bese uxubha kahle ngamanzi.
Okukhukhumalisa amakhekhe, lapho kuhlangene peroxide, yakha wokuxubha imfanelo kunciphisa amagciwane futhi aqede ndawo, kuzwakala. Zama ukuxubha amazinyo akho ne isixazululo phakathi 5-10 imizuzu. Njalo qaphela ukuthi awazi ukuthi ukuxubha nalapho kungasadingekile kanzima, njengoba ingxube ngempela obulimaza izinsini zakho.
TIP! Enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuqinisekisa amazinyo akho ahlale elimhlophe ukuze usethe aphoyintimenti avamile ngokuvakashela wamazinyo ukuze zihlanzwe. Kuphela yokuhlanza professional kungaba ukuhlehlisa zeminyaka tartar Ukwakha-up and ukushintsha kombala.
Uma amazinyo akho uqale esibuhlungu noma azwele uma usebenzisa umkhiqizo whitens amazinyo, Ukusetshenziswa bayeka ngokushesha. Ungase ukwenza umonakalo ezingaphezu kuka wazi ukuba amazinyo akho, ngakho kungcono kakhulu ngaleso sikhathi ukuze uthole isincomo professional. Buza udokotela wamazinyo wakho mayelana nezinketho zakho.
TIP! nokuvungula avamile futhi ukuxubha amazinyo akho uphakathi izindlela eliphumelela kunawo wonke e mhlophe amazinyo akho. Ngokusebenzisa lezi zinqubo, wena kuzonciphisa uqwembe ukugcwala kwamanzi, a imbangela enkulu yokuqothulwa kwehlathi amazinyo ashintshe umbala.
Njalo landela yonke tinkhombandlela imikhiqizo ekhaya mhlophe oyisebenzisayo. Lokhu kungaba obulimaza izinsini zakho futhi ukulimala teeth.Use amazinyo mhlophe imikhiqizo ncamashi kanye kuphela njengoba uyalelwe umenzi.
Ngemuva kokuthi alandele amazinyo mhlophe inqubo, kubalulekile ukuthi ukuxubha amazinyo akho njalo ngemva kokudla. Uma ake ukudla ukwakha on amazinyo akho, umuntu angaba ukukhula webhaktheriya emlonyeni wakho. Amagciwane kungathambisa amazinyo akho, okuyinto engenza nabo bathambekele kakhudlwana kunabanye umonakalo futhi uwohloke.
TIP! Gwema ugwayi, ikhofi netiye eqinile. Lezi zinto kungaba vula amazinyo akho brown.
Ukuphuza ikhofi kanye nezinye iziphuzo staining ngokusebenzisa straw kuyindlela ephumelelayo kokuthola amazinyo mhlophe. I utshani unikeza umthamo isikhathi kubangele amazinyo staining. Lolu ketshezi ngeke adlule amazinyo oqonda ngqo phansi umlomo wakho.
Beka sitrobheli juice on isixubho kanye shayela njengento evamile mhlophe amazinyo akho. I acid kusukela ijusi ithambisa izinyo lakho koqweqwe lwawo, ngaleyo ndlela ungase ukwazi ukuhlanza away ingxenye enkulu ichaza ukushintsha kombala emazinyweni akho. Uzokwazi ukuba ukubuyisela-dollar ayizigidi ezingu-wakho smile for incane kakhulu kunaleyo ayisigidi kusetshenziswa le ndlela.
TIP! Ngemuva mhlophe amazinyo akho, zisebenza Vaseline ukukukhumbuza ukugcina smiling. Kungase kudingeke flavour evumayo, kodwa kuhle at kwakheka ukuvinjelwa ukuthi sinikeza ukuvikelwa wakho amazinyo kusuka staining for ambalwa.
Ukuxubha amazinyo akho njalo ukuqinisekisa ukuthi ufuna ukugcina smile omkhulu. Ukudla nezinye izinto kungaba ukwakha on amazinyo akho futhi ibala nabo ngemva kwesikhathi esithile. Akufanele kudingeke ukhathazeke izinyo ukushintsha kombala njengoba nje ulondoloza avamile esimisweni esivamile amazinyo-ukuxubha.
Gwema usebenzisa mouthwashes ezinemibala. Lezi mouthwashes bangase iqalele umoya wakho, kodwa cishe ibala amazinyo akho kule nqubo. Utshwala luyinto iningi, futhi ezingalimaza ulimi lwakho kanye izinsini kungenziwa angena egazini lakho.
TIP! Wena ukuvikela amazinyo akho by ukuxubha nabo. Ungathatha kanye ke elinye igxathu eliya phambili, futhi uqale usebenzisa umuthi wokuxubha whitens amazinyo akho.
Iphinde kungabangela ebucayi ukuzivikela staining.
Xoxa wamazinyo wakho ngezindlela abaphile mhlophe amazinyo akho ngaphambi kokuthenga noma yini. Wamazinyo wakho ngeke bazi lokho ongakhetha best ezikhona, futhi noma yena uyophinde bakwazi ukutshela mayelana nemiphumela emibi ehambisana izinhlelo ezithile amazinyo mhlophe.
TIP! Yenza umkhuba nokuvungula amazinyo akho. Nokuvungula aids ekususeni uqwembe, elibangela nezindaba ukushintsha kombala ngamazinyo akho.
Uma umlomo wakho iqala awokulimaza, ngokushesha ayeke mhlophe. Uma uhlangabezana uzwela ngenkathi usebenzisa imikhiqizo mhlophe, kumele ngokushesha umise ukusebenzisa umkhiqizo okuthukayo uze ukwazi ukuxoxa ngale ndaba wamazinyo.
Ngoba amazinyo mhlophe, ungaphuzi itiye noma ikhofi. Lezi iziphuzo discolor amazinyo. Uma ubungase ukuphuza ikhofi, qiniseka ukuthi Hlambulula umlomo wakho ngokushesha ngemva kokuthi uqedile. Lokhu kungakusiza ukuba wehlise yini imiphumela engemihle kwalezi ziphuzo babe on amazinyo akho.
TIP! Zama ukuba angadli izithelo ezisawolintshi uma ufuna amazinyo akho ukubheka mhlophe. Ngaphezu kwalokho, ukugwema umpe izithelo ezisawolintshi.
Khuluma izinyo mhlophe inqubo. Musa mhlophe amazinyo akho ngemva kokuthola kuhlolelwe izimbotshana noma yimuphi umsebenzi wamazinyo.
Kufanele ugaye elomile amaqabunga bay futhi peels orange ibe yimpuphu. Engeza amanzi kule powder kanye shayela nalesi ngxube. Ukwenza lokhu kuzosiza ukuvikela isifo sezinsini kanye izimbotshana.
TIP! Sebenzisa ziyadliwa amagxolo omuthi mhlophe amazinyo akho. Thatha kancane encane amagxolo basihlikihle it on amazinyo akho.
Sebenzisa i-hydrogen peroxide mhlophe amazinyo akho. Ungenza lokhu ngokumane ekushoniseni a washcloth noma iyiphi impahla ukotini bacwilisa angena ikhambi. Hlikihla indwangu emanzi phezu izindawo amazinyo akho njalo. I peroxide kusiza amabala Akhanyise kanye indwangu ukugeza uyokwenza njengoba scrubber.
Abanye angokwemvelo kuzosiza namazinyo zibe mhlophe, ezifana apula cider uviniga. Le ndlela kusiza lubulale amagciwane kanye amabala emlonyeni wakho, njengoba ehlanza amazinyo akho kule nqubo. Bhadlaza umphimbo kanye ngosuku, ngokuvamile ekuseni, ne uviniga apple cider, futhi silandele it up by ukuxubha amazinyo akho.
TIP! Ukuxubha amazinyo akho ngosawoti. Usawoti khambi ukuthi kungokwemvelo futhi kungasiza ukubabulala ndawo, kuzwakala on amazinyo akho.
Chase iziphuzo ibala-okubangela ngamanzi. A ingilazi yamanzi hashaza evimbela ibala ebangela isiphuzo kusukela ekubekeni. Omunye futhi umqondo uwukuthi ukusebenzisa straw lapho ukuphuza iziphuzo amnyama-ezinemibala.
Ukuxubha amazinyo akho nge ikhasi banana. Le nqubo ilula kakhulu futhi engabizi, ngakho ungakwazi nokuqalisa bayifaka isimiso sakho sansuku zonke. Uma uke ehlutshiwe banana, run ikhasi phezu amazinyo akho nje phambi kwakho ukuxubha nabo. Ngemva kokwenza lokhu, ukuxubha amazinyo akho njengoba ujwayele belungafica. Lokhu kuyokunika mhlophe ngokushesha imiphumela.
Sebenzisa side soft i amakhasi orange sika balahle amabala amazinyo akho. Ungase futhi mix omisiwe ikhasi orange ne bay fake kutsho ishiya ukwenza unama amazinyo akho. Qiniseka ukuthi uxubha umlomo wakho ngokuphelele afterwords ukususa zonke ushukela wezithelo.
Ningabalaleli yimuphi umuthi wokuxubha bathi uzoba akunike amazinyo mhlophe. Bangase ukukunika nomphumela kungelutho mhlophe, kodwa uqaphele ukuthi amasu ezengeziwe cishe ezidingekayo. Uma namanje bekhetha ukusebenzisa umuthi wokuxubha mhlophe, qinisekisa ukuthi uthole omunye ukuthi unalo baking soda kulo.
Cela udokotela wamazinyo wakho ukukunikeza ijeli lingasetshenziswa ekhaya ukuze usize mhlophe amazinyo akho bheka mhlophe. Le nqubo kungenza amazinyo akho by shades up kwabayisishiyagalombili!
Uma uzama ukuthola amazinyo mhlophe, ukuya wamazinyo ukuze baye kubo bahlanza kaningi ngangokunokwenzeka. cleanings avamile zamazinyo ungomunye yezindlela eziphumelela kakhulu ungakwazi afake mhlophe yakho amazinyo eziyalezweni. Udinga uvakashele udokotela wamazinyo wakho for cleanings okungenani njalo ezinyangeni eziyisithupha.
Udinga ukuqinisekisa unayo isixubho esifanele ukuxubha kahle amazinyo akho uhlobo. An isixubho electric muhle ikakhulu nokususa uqweqwe olunamagciwane futhi amabala zanqwabelana amazinyo akho nsuku zonke. Lokhu kuzokwenza ube amazinyo ngokwemvelo okuhlanzekile futhi mhlophe.
Kufanele ukuhlanza futhi zibe mhlophe amazinyo akho uma ulandela nsukuzonke ngomuthi wokuxubha nokuvungula. Khetha nemikhiqizo equkethe lezo baking soda njengoba yemvelo mhlophe isithako njengoba zisebenze kahle kakhulu kokukhipha ndawo, kuzwakala.
Ungakwazi ukugcina amazinyo akho amhlophe ngokusebenzisa straw ngemva kwanoma iyiphi procedure.Drinks mhlophe enezinga eliphakeme umbala zombala ezingaba ibala amazinyo akho. Ukusebenzisa utshani kuzovimbela phambi amazinyo kusukela zaso ezixhumana ngokuqondile amakhemikhali staining.
Yidla ukudla anempilo ukuthi kukhona ezinoshukela. I abrasiveness zokudla ezinoshukela engeza ukuhlanzwa amandla ukuze amazinyo akho uma ukuhlafuna kubo. Bite kubo wonke, musa usike nabo up!
Zenze unama sitrobheli for ukuxubha amazinyo. Strawberries Sekuyisikhathi eside ayedume mhlophe amazinyo akho. Ukuze besazwana ezinye unama for wena, uzodinga 1/4 indebe amanzi, okukhukhumalisa amakhekhe (1/2 cup) strawberry futhi abathathu eziye ecubuziwe.
Ungabhemi nogwayi noma ugwayi. Zombili lezi ziye kungase kutholakale discolor amazinyo akho ukuze athole ezishintshe umbala. Zama ukuyeka ukubhema ukuze ugcine amazinyo akho kaphendukelanga yellow. Uma ukuthola kunzima ukuyeka ukubhema, abonisane udokotela wakho ukuze uthole iziphakamiso noma imithi ukukusiza kule nqubo. Udinga kusitwa emihle futhi isiqondiso esifanele enga-.
Namuhla, wena ngempela kabanazaba nibekezelelana emomotheka yellow. Ungathola ngokumamatheka licace ngokusebenzisa omunye wemizi eminingi imikhiqizo mhlophe amazinyo yenzelwe ukusetshenziswa ekhaya. I kits mhlophe ungasebenzisa ekhaya kukhona okuningi engabizi kuka mhlophe izinqubo amazinyo, futhi ngokuyisisekelo akunike Chile efanayo.
Posted by mhlophe Amazinyo Guide - June 5, 2016 kweyoku-1:02 AM
Izigaba: Home Based mhlophe Amazinyo Tags: Izithelo, ijikijolo, amazinyo mhlophe, imikhiqizo mhlophe, amazinyo mhlophe